Mhando dzePediatric Wiricheya | Karman® Mawiricheya
Kune zvakasiyana mhando of chevana mawiricheya iyo inosanganisira mwana mudiki mavhiripu, kurima macheya evana nevechidiki, lightweight kana zvemitambo mavhiripu, mureza mavhiripu, dzakagadzirirwa macheya, vana vane simba mavhiripu, uye vafambisi. Mawiricheya evana zvakajairika zvinogadziriswa saizi uye mavara. Kwete chete vabereki vanogona kuwana yakasarudzika-yakagadzirirwa chigaro chemwana wavo, asi inopa vana mukana wekusarudza mafaro mavara kwavari ayo anogona kuvaka kuzviremekedza uye kubvumidza kuzvimiririra.
Mhando yega yega of chevana mawiricheya inotaura nezvezvinonetsa zvakasiyana zvezvirwere zvakasiyana nezvido. Mazhinji mawiricheya emawoko inofambiswa kushandisa ruoko simba, nepo vamwe vane furemu yepasi yakagadzirirwa kuitiswa kushandisa gumbo simba. Hukuru hwakasiyana. Pane mhando chaizvo yevana vane makore matanhatu zvichidzika uye vamwe kwemakore matanhatu zvichikwira. Ivo vanochinjika nekuti vana vari kugara vachikura.
Kunewo zvakare mawiricheya emagetsi izvo zvinobatsira mukuchengetedza simba revana pamwe nekuwedzera kuzviremekedza. Nepo vamwe vangave vari pasi pekufungidzira kuti vana vadiki havazokwanise kuvhiya wiricheya yemagetsi, kutsva kutsva kwakawana kuti pasi pekutarisirwa, vana vadiki vanogona kudzidza kuishandisa nyore nyore. Iyo inowanzo shandiswa ine inobata ruoko-yakabata, zvakanyanya senge mutambo wevhidhiyo uye isarudzo huru kune vana. Avo vanosarudza a wiricheya yemagetsi kazhinji ndivo vasingakwanise kuzvifambisa.
Mafambisi akagadzirirwa vana vadiki kwazvo kana avo vasingakwanise uye vasingade kuzvifambisa mu wiricheya, yakafanana neinjiniya wiricheya. Nekudaro, iyi sarudzo yakanaka yemari. Vanofambisa vanogona kuve vakagadzirwa nemhando dzakasiyana zvinhu uye sarudzo kusanganisira matereyi, canopies, harnesses, uye rutsigiro. Iyo zvinobatsira yevatyairi vanosanganisira kutsigira musoro nemutsipa uye kukurudzira vana kuti vagare vakamira izvo zvisingakwanisike nemutyairi anotengesa. Izvi zvakavakirwa-mukati zvigadziriso uko hwaro hunopetwa. Icho chakareruka kupfuura chetsika mavhiripu uye inowanzo gadzirirwa yemacheya emagetsi.
Simuka furemu mawiricheya anoshandiswa kune vana vasingakwanise kuzvimiririra. Semuenzaniso, vana vane cerebral palsy vanobatsirwa nazvo mhando of wiricheya nekuti zvinovapa iwo mukana wekuzvimiririra. Chimiro chekumira chakazivikanwa kuwedzera kutenderera, kuvaka musimba simba nekubatana munzvimbo dzisina kusimba, uye zvirinani basa redundira. Features inosanganisirwa nemapuratifomu evana anomira anokwanisa kusanganisira matray uye mahanesi. Rudzi urwu zvevana wiricheya inokurudzirwa kune avo vana muhutano hwepanyama, senzira yekubatanidza vana mukirasi yakajairwa kana mararamiro.